IZIPHO EZINGAMA-57 ZIKAMAZALA WAKHO: IZIMVO ZETHU EZIPHAMBILI ZANGO-2021 - IZIPHO
Eyona Izipho Izipho ezingama-57 zikaMamazala onayo yonke into
Izipho ezingama-57 zikaMamazala onayo yonke into
Thenga izimvo zethu ngalo lonke ixesha-ukusukela kusuku lukaMama ukuya kumhla wokuzalwa kwakhe. Imifanekiso yeNyoka / iShutterstock
U-Naoimh ubhala amanqaku e-Knot yeHlabathi liphela, egxile kwiivenkile ezinokuthengwa ukusuka kwizikhokelo zesipho ukuya kwifashoni yomtshato.
Ngaphambi kokusebenza kumxholo wokuhlela, uNaimim wabhala iinkcazo zangaphambili zevenkile zabanye abathengisi bomtshato beKnot Worldwide.
UNaoimh wafunda ukubhala ngobuchule ekholejini kwaye uhlala eGalway, eIreland
Ukuhlaziywa ngo-Epreli 09, 2021 Sifake iimveliso zomntu wesithathu ukukunceda uhambe kwaye wonwabele awona maxesha makhulu obomi. Ukuthengwa okwenziwe ngekhonkco kweli phepha kungasifumana ikhomishini.
Ukuchukumisa umama we-SO kunokuba yinto eyoyikisayo emva kokubopha iqhina njengokuba kwakunjalo ukuqala kwakho ukuthandana. Ngethamsanqa kuwe, siziingcali xa kufikwa ekukhetheni izipho zabazali beqabane lakho . Sinezipho kumamazala wakho ukuze zilungele lonke ixesha, kubandakanya nosuku lukaMama, usuku lokuzalwa kwakhe kunye neeholide. Ngaba ayisekho ngokusemthethweni yosapho? Akukho maxhala! Olu khetho lucingayo luya kwenza izipho zomamazala ezizayo.
Ukwenza i-Operation Impress kwi-In-Laws ngokulula kangangoko kunokwenzeka, siye sazaphula izinto ngamanye amaxesha. Oko kwathethi, uninzi lwezi zipho luya kusebenza unyaka wonke. Ukusuka kwigumbi lokuphumla elonwabisayo ukuya iibhokisi zokubhalisela ezizodwa , kukho into eyenzelwe wonke umntu — nditsho nomamazala onento yonke.
Izipho zoMama zoSuku kuMamazala wakho
Izipho Zokuzalwa Zonyokozala
Izipho zeholide zoMamazala wakho
Izipho Zomtshato Zomama Wakhozala
Ukuba i-MIL yakho ibisoloko ikwamkela kusapho ngezandla ezivulekileyo, ngoku lithuba elifanelekileyo lokubonisa umbulelo wakho. Ngokuqinisekileyo, ukubhala ikhadi loSuku loMama sisiqalo esihle, kodwa ukuba ufuna ngenene ukuhamba imayile eyongezelelweyo, sicebisa ukuba nathi sifumane isipho. Akunyanzelekanga ukuba ibeyinto egqithisileyo — yinto nje encinci oyibulelayo.
Ikomityi yeKofu ehlekisayo
Ngokuqinisekileyo akufuneki ukuba wophule ibhanki ukuze ufumane izandla zakho kwisipho esinentsingiselo kumama weqabane lakho. Le imagi yekhofi emnandi kunye nothando iya kumkhumbuza ukuba ucinga njani ngalo lonke ixesha ethatha isiselo.
I-Chalet ephosakeleyo Freakin 'isipho esimangalisayo somamazala, ukusuka kwi- $ 19, Etsy.com
Igadi yangaphakathi epholileyo
Ewe kunjalo, ukuba ufuna splurge kancinci kumamazala wakho omangalisayo, kulungile ke! Esi sipho sikrelekrele simvumela ukuba enze igadi yakhe unyaka wonke ukusuka kwinduduzo yekhaya lakhe. Ngcono ngoku, yonke into izenzekelayo, ngenxa yoko akufuneki aphakamise umnwe. Zininzi iimbewu zeembewu zokuba akhule, ukusuka kumayeza kunye nemifuno ukuya kwiintyatyambo nakwizityalo zokuhombisa.
Cofa kwaye ukhule Igadi eyiSmart 3, $ 100, Cofa kwi & Grow.com
Ikheshi yobhaliso lweti
Kutheni ungamoshi umazala wakho olu suku lukaMama ngebhokisi yokubhalisela ebonisa umdla wakhe? Ukuba umama weqabane lakho uhlala enikezela ngesiselo esitsha, buyisela inceba ngonikezelo lweti olonyusiweyo lweti evela kwihlabathi liphela.
IiSips nge Ikhadi lesipho lesipho lomntu, ukusuka kwi- $ 45 kwiinyanga ezi-3, Sipsby.com
Intsingiselo yeGlasi yokuhombisa
Coca umhombiso wasekhaya ngokuhombisa okunentsingiselo okuhlonipha ubudlelwane bakho bosapho obutsha. Ezi globhu zikhethekileyo zimele ubudlelwane obukhethekileyo obakhe kunye nesinye isiqingatha esikufutshane nesithandwa kakhulu. Yenye yeembono zethu esizithandayo esizithandayo kumamazala nokuba kwenzeka ntoni.
UStephen Kitras Ubudlelwane buphinda busetyenziswe kwakhona kwiiglobhu zomthi zeglasi, $ 49 inye, UncommonGoods.com
I-Sanitizer yasekhaya efanelekileyo
Le gadget intsha intle inokuba nexabiso elincinci, kodwa sithembe, iya kuba yinto efanelekileyo xa ubona indlela ayisebenzisa ngayo. I-HomeSoap isebenzisa ukukhanya kwe-UV-C ukubulala iintsholongwane kuyo nayiphi na into ebekwe ngaphakathi kwimizuzu nje embalwa. Luhlaziyo lwe-roomier kwiFowuniSoap, okuthetha ukuba unokulungela izinto ezingaphezulu ngaphakathi. Ewe kunjalo, kukho indawo eninzi yezinto ezincinci, njengefowuni yakhe, amaqhosha okanye ubucwebe.
IfowuniSoap I-HomeSoap, i- $ 200, IfowuniSoap.com
Iresiphi yeRetro Recipe
I-tin yeresiphi enesitayile sisipho esifanelekileyo sonyokozala othanda ukuzama ekhitshini. Ukuba ufuna ukumchukumisa, ziphose kwezinye amakhadi eresiphi afanayo njengokuba. Ngubani owaziyo, mhlawumbi uya kwabelana ngemfihlelo kwesinye sezitya zakhe ezidumileyo kunye nawe.
IRifle Iphepha Co. I-recipe ye-Citrus Floral tin, i- $ 34, ThePrincePhu.com
Izipho ezilungileyo kumamazala wakho zezona zibonisa umdla wakhe. Ukuba akaze ashiye indlu ngaphandle kwe-lippy yakhe, uyayixabisa i-whimsy emva kwezi chocolate zenziwe ngemilebe. Iseti yesipho ikwabandakanya iintyatyambo ezintle ze-violet kwindawo yokulungiselela ukubonisa ukulungela.
Isixeko Iseti yesipho seGloss, $ 60, Ngokwe-Status.com
Itreyi yeChic yokutshaja
Ukuba umama wakho we-SO ngoyena mntu ulungelelanisiweyo omaziyo, angayivuyela le tray yokuhombisa iphindwe kabini njengetshaja yefowuni engenazingcingo. Kwaye, ukuba ujonge izipho ezenzelwe wena ngumamazala wakho, unokuzenza zilandelwe.
Ukubaleka Bamba: I-3 yetreyi yokufikelela, $ 175, StayCourant.com
Amava okungcamla iwayini
Ukuthenga i-connoisseur eyaziwayo? Ukuhamba ngenqwelomoya kubandakanya ezisibhozo zeewayini zikaRhulumente zeGolide. Ibhotile nganye iqulethe iglasi enye ye-vino, eyenzela amava anomdla kwaye alula. Ngcono okwangoku, unokulijika igumbi lakhe lokuhlala libe sisidiliya ngokucwangcisa ukungcamla okwenyani kwiwebhusayithi yophawu.
Ngandlela elungileyo Umxube wewayini waseCalifornia, $ 65, InGoodTaste.com
Ikhandlela elimnandi elimnandi
Eli khandlela lolunye uhlobo. Yenziwe ngeoyile ye-olive yaseBrightland-ewe, uyifundile ilungile- kwaye yenzelwe ukutshiswa ngexesha okanye emva kokupheka. I-oyile ye-olive inceda ukukhuthaza ixesha elide lokutshisa kunye nokongeza ivumba lalo elikhethekileyo kumxube.
IBrightland Ikhandlela lokugaya, $ 42, IBrightland.co
IBhodi yomthi ekroliweyo
Izixhobo zokupheka ziya kuhlala zizipho ezilungileyo kumamazala wakho, ngakumbi ukuba uza kuphila ekhitshini. Mbonise ukuba uyazi ukuba ngubani umphathi webhodi ye-rustic yokuqhawula ngomthi ebhalwe igama lakhe.
Ubisi kunye nobusi ibhodi yokusika yesiko, ukusuka kwi- $ 40, Etsy.com
Ingubo yePotton yePlush
Ayifumani cozier kakhulu kunale ndawo yokuhlambela oyithandayo. Emva kwayo yonke loo nto, yenziwa luphawu olwakhiwe ngeenxa zonke 'Zonke izinto zithambile kwaye ziyamangalisa.' Siyayithanda imibala onokukhetha kuyo: umhlophe ofanele ihotele, luhlaza-luhlaza opholileyo, blush entle kunye namatye angwevu anamhlanje.
Iparashute Ibhafu yakudala, $ 99, YIngUIHome.com
Nokuba ufuna izimvo zesipho seKrisimesi kumamazala wakho, into ethile ngomhla wakhe wokuzalwa okanye uMhla woMama ongalibalekiyo, singabalandeli abakhulu beTheragun. Esi sixhobo sokumasa simangalisayo sinamandla, kulula ukusisebenzisa kunye ne-ultra cwaka ukuqala. Utshintsho olupheleleyo lomdlalo.
Unyango Inkulumbuso, i-299 yeedola, Theragun.com
Isonka seKuki esimnandi
Mxelele ukuba unombulelo kangakanani ukuba uyi-MIL yakho. Ezi cookies zimnandi kwaye zilungiswe ngokucocekileyo ziluhlobo lwesenzo sentliziyo esimnandi esinokumphakamisa nyhani ngolu suku lukaMama.
IiKuki zikaCheryl I-buttercream iqabunga ientyatyambo ezinamaqhosha amade amade, $ 50, Cheryls.com
Isitayile saseDatshi esithandwayo
Amathuba ziimbiza zakhe kunye neepani azikhazimli okanye zintsha njengoko babeqhele ukwenza. I-oven yaseDatshi efikelelekayo ngokumangalisayo yinxalenye yeqoqo elitsha lokupheka likaDrew Barrymore. Iza ngeendlela ezine zombala we-chic, kubandakanywa le phunga eliluhlaza eliluhlaza. Ukuba unethamsanqa, unokukumema ukuba uhlale isidlo sangokuhlwa!
Entle NguDrew Barrymore I-6qt enamel i-oveni yaseDatshi, i- $ 60, Walmart.com
Ukuvuselela iseti yeSepha
Xa kuziwa ekukhetheni isipho soSuku loomama kumamazala wakho, nantoni na anokuyisebenzisa ukuzitotosa iphumelele. Le luxe trio ibandakanya iintlobo ezintathu ezahlukeneyo zesepha ezinobunkunkqele bokuzisebenzisa ebusweni nasemzimbeni. Unokukhetha phakathi kokuthambisa udongwe olupinki, ukucoca amalahle oqalo kunye nodongwe oluhlaza oluhlaza okuxhomekeke kwiimfuno zakhe.
Ingca yezityalo Botanicals isepha ezintathu, $ 32, HerbivoreBotanicals.com
Isakhelo somfanekiso wedijithali
Ukuba iindonga zakhe zixhomekeke kwiifoto zosapho, isakhelo somfanekiso wedijithali yeyona ndlela ilungileyo yokugcina indawo. Isixhobo esinobuqili sixhuma kwi-WiFi ukuze ukwazi ukongeza ngokulula iifoto zakho kunye nesiqingatha sakho. Le ikwanomboniso omkhulu we-intshi ezili-15, ke ukubukela iifoto kuya kuba kokonwaba ngakumbi.
Nixplay Isakhelo sefoto esine-intshi eyi-15.6, $ 320, Nixplay.com
Ukhetho olukhethiweyo lweTruffle
Ekuzingeleni isipho kumamazala onayo yonke into? Ibhokisi yee-truffles ezicolileyo ze-chocolate yinto evuyisayo nabani na onokuyixabisa.
Ethel M Iitshokholethi Ingqokelela yeTruffle, ukusuka kwi- $ 30, EthelM.com
I-Ceramic Coaster eyenziwe ngumntu
Ngaba awuqinisekanga ukuba uza kufumana ntoni? Sinezipho ezininzi ezilungileyo zoomamazala abaza kuza. Ezi coasters zeceramic ezincinci ziya kujongeka zi-chic ngokwenene kwitafile yakhe yekofu, kwindawo yasebusuku okanye naphina apho onwabela ikofu yakhe yasekuseni.
Ukusuka eWillow I-ceramic coaster eyenzelwe wena, i- $ 9, Etsy.com
Ngaba uziva uxinezelekile malunga nosuku lokuzalwa lukamazala wakho? Masithathe ivili. Olunye lwale mibono intle kunye noyilo ngokuqinisekileyo luzisa uncumo ebusweni bakhe.
Isleek yeWayini eChiller
UTy Mecham, uJulia Gartland, uLoy Rocky, uBobbi Lin, uJames Ransom
Yintoni engcono kunokunikezela ngebhotile esemgangathweni yewayini? Into yokuyigcina! Le chiller yebhotile yesitayile iya kuyigcina i-vino yayo kwisimo esifanelekileyo iiyure kwaye izakubonakala intle kwitafile yesidlo sangokuhlwa.
Vinglacé Ibhotile yewayini ebandayo, $ 90, Ukutya52.com
Ukutyibilika kweMoccasin Slippers
Wonke umntu ufuna isiliphu esilungileyo, kwaye ezi UGGs zinamanzi ziitikiti nje. Ngalo lonke ixesha etyibilika iinyawo zakhe kwezi zinto zintanda (kwaye zihlanya), uya kuba nombulelo kuwe.
UGG Isiliphu sokumelana namanzi i-Ansley, $ 100, Imvu.com
Iikomityi zokulinganisa ezintle
I-PSA: Ukulinganisa iikomityi akufuneki kube kukudika. Ukuba awukaqiniseki ngento yokufumana umkhwekazi wakho ngomhla wokuzalwa kwakhe, uhombise ikhitshi lakhe ngezinto ezintsha, zodidi awayengenakuze azenzele zona.
I-Anthropology Iikomityi zokulinganisa i-Dagny, i-32 yeedola iseti ye-4, Anthropologie.com
Iipijama zeSilk zodidi
Ukuthetha ngezipho zodidi zonyokozala, uluhlu lwethu alunakugqitywa ngaphandle IsiLunya . Impahla yokuphumla yohlobo lophawu ayitshiphu, kodwa iya kumenza azive engukumkanikazi. Khawufan 'ucinge ukonwaba kwakhe xa esiqonda ukuba umatshini unokuhlambeka!
IsiLunya iseti ye-cami yesilika enokuhlanjwa, $ 238, Lunya.co
Teapot yesiNtu yamatye
Ukuba ungumntu othanda iti yasemva kwemini, kutheni ungayihlaziyi itapoti yakhe yakudala? Olu khetho lwamatye amancinci luya kujongeka ngokungakhathali kwi-countertop nokuba ayisebenzi.
Ndilitshintsha njani ifani yam emva komtshato
I-Anthropology I teapot yaseGeorgia, $ 42, Anthropologie.com
Ngubani ongafuniyo ibhulukhwe ebonakala ngathi ibekwe ngokudibeneyo kodwa eneneni ikhululekile njengokubila? Hlaziya ikhabethe lomamazala wakho ngesi sipho sokuzalwa sisebenzayo.
Amazwi angaphandle Ixesha leRectrek, $ 98, Ngaphandle kweeVoices.com
Ubhaliso loBuchule boBuchule
Iinkonzo zokubhaliselwa zizipho ezilungileyo kwi-MIL yakho, ngakumbi ukuba unokufumana enye ebonisa ukuthanda kwakhe. Le yeyomama owaziyo indlela yakhe ejikeleze iinaliti zokunitha. Rhoqo kwiiveki ezine iinyanga ezili-10, uyakufumana umsonto kunye nepateni yokwenza imivumbo emithathu ye-afghan. Ubhaliso luphela ngenyanga ye-11th kunye nemiyalelo yendlela yokugcwalisa ingubo.
Ka-Annie Iqela elibekiweyo leKlabhu yaseAfghan ebhalisiweyo yenyanga, i-20 yeedola ngenqanawa, NguyenNguyenHcube.com
Isifundo sokupheka kwi-Intanethi
Itafile eSur la ngeFacebook
Okanye mhlawumbi umama weqabane lakho ukhetha ukudala ekhitshini? Ukuba kunjalo, asinakucinga ngesipho esingcono sokuzalwa kukamazala wakho kunesifundo sokupheka. Kwitafile ineeklasi ezininzi ezinomdla onokukhetha kuzo, ke kuya kubakho into ayithandayo.
Kwitafile iklasi yokupheka kwi-intanethi, ukusuka kwi- $ 29, SurlaTable.com
Umqala weentyatyambo zokuzalwa
Ezi ntsimbi zintle zediski zihonjiswe ngeentyatyambo zokuzalwa zenyanga nganye. Khetha nayiphi na efanelekileyo kumama weqabane lakho ukuze ayinxibe njengophawu olumnandi, lobuqu.
Yenziwe nguMariya intambo yomqala weentyatyambo, ukusuka $ 32, MadeByMary.com
Ukuba i-MIL yakho ihlala igqibezela ubuhle bayo nge-spritz yesiqholo, uya konwaba ukongeza eli vumba limnandi kwingqokelela yakhe. Amanqaku eziqhamo kunye neentyatyambo ayahlangana ukuze enze ivumba elimnandi-kodwa-elifihlakeleyo.
uvuyo Folle de Joie ivumba elimnandi, $ 120, joie.com
Ukuhanjiswa kweziTyalo ngenyanga
Ngaba omnye umama wakho wesiqingatha unesithupha esiluhlaza? Ukuba uhlala ekunceda ngeengxaki zakho zezityalo, le nkonzo yokubhalisa ipholileyo yindlela efanelekileyo yokubuyisela inceba. Kwinyanga nganye, uyakufumana uhlaza oludlamkileyo noluzaliswe yimbiza yokuhombisa yodongwe.
Inkqubo Ukubhaliswa kwezityalo zakudala, $ 60 ngenyanga, TheSill.com
Ubhaliso lweKofu yaseVietnam
Kukho isizathu sokuba sibe neenkonzo ezimbalwa zobhaliso kuluhlu lwethu: Sisipho esiqhubeka nokunikela! Phucula umkhwa kamamazala wakho ngokuzisa ikofu emnandi yaseVietnam veki nganye, iiveki ezimbini okanye inyanga nenyanga. Ngaba unokucinga ngento elula ngakumbi kunokuba ikofu iziswe kanye emnyango?
Nguyen Ukubhaliswa kwekofu yaseVietnam, ukusuka kwi- $ 57, NguyenCoffeeSupply.com
Ewe, ukuba uphelele kwikofu okwangoku, ungakhathazeki. Zininzi iindlela zokwenza ijoe yakhe yakusasa. Le imagi ikrelekrele (kwaye inesitayile esimangalisayo!) Imagi igcina iziselo ezishushu kanye kubushushu obufanelekileyo-yixhume nje kwifowuni yayo ukuseta ukhetho.
Umntu Ulawulo lwe-14oz lobushushu be-mug elungileyo, $ 130, Amazon.com
Ingxowa enegumbi ihlala ifumaneka ngokufanelekileyo. Le toti ye-chic kunye neyomeleleyo inendawo eninzi yokugcina izinto ezinje nge-laptop yakhe okanye ibhegi yokuhombisa, kunye neecomputer ezincinci zefowuni yakhe, izitshixo kunye nezinye izinto-kwaye ayithethi loo nto ingaphandle kwesikhumba sase-Italiya. Yenze ngokwakho nge-monogram yakhe ngohlobo oluthile lokuchukumisa.
ICuyana iklasikhi yesikhumba esimiselweyo, ukusuka kwi- $ 195, Cuyana.com
Ukujonga umkhondo wokuBala
Itekhnoloji yokomelela kwamva nje ngumhla wokuzalwa ongenamsebenzi kumamazala ekhaba ngempilo. Ukuba uhlala ekuhambeni, mkhuphele iwotshi enesitayile entsha eya kuthi ilandele indlela yakhe, ukubetha kwentliziyo, ukulala nokunye.
UFitbit Intlawulo 4, $ 150, UFitbit.com
Akunakukhawuleza ukuqala ukuza nezimvo zexesha elizayo leholide. Ukuba uluhlobo lokuqala ukuthenga kwakho kwangoko (okanye ufike nje ukuza kuphefumlelwa), ezi zipho zinomdla yindawo efanelekileyo yokuqala. Sineetoni zezimvo onokuzithenga ngqo ebhedini yakho, nokuba uzingela isipho esihle seKrisimesi kunyokozala okanye ubhiyozela enye iholide ebusika kunye.
Ukuqokelelwa kweSpice ezahlukeneyo
Ukuba ikhaya lakhe lihlala ligcwele ivumba lesinamoni okanye isonka esisikiweyo esisandula ukubhakwa ngexesha leeholide, ungabheja le ngqokelela yeziqholo ze-Deluxe iyakusetyenziswa kwangoko. Inezinto ezisibhozo zokubhaka ezithandwayo, kubandakanya i-vanilla extract, i-ginger yomhlaba kunye ne-Dutch cocoa powder.
Indlu yeziqholo ingqokelela ye-deluxe yombhaki, $ 90, TheSpiceHouse.com
Iglavu yeCashmere ethambileyo
Ngaba izandla zakhe azifanelanga ukuba nazo zonke? Dlulisa ikhesmere, nceda! Ezi glavu zasebusika ziyinxalenye elinganayo ethambileyo kunye nesitayile-olongezelelo olufanelekileyo kwikhabethe lakhe leholide. Thetha ngobukhazikhazi bezipho zeKrisimesi!
YibaniCashmere Iiglavu zothando, i $ 95, NguyenNash.com
I-Mug eyenziwe ngezandla
Akukho nto ifana nokuziva uthomalalisa isiselo esishushu ngorhatya lobusika. Mnike olo lonwabo ngoncedo lwale makhi intle, inokwenziwa ngokwezifiso. Yenze ibe yeyakho ngegama lakhe lokuqala, i-monogram okanye isiteketiso wena okanye abantwana bakho. Ngaba unokucinga ngesipho esimnandi seholide kumamazala wakho?
ULaura Lynn Pottery imagi eyenziwe ngesandla enegama, $ 46, Etsy.com
Ikhalenda yePhoto ebalaseleyo
Ukuba uthanda iifoto zosapho, uyayithanda ikhalenda ebhalwe igama lakho. Le walnut ye-chic iza nokuma kwesikhonkwane, ilungele ukuphakamisa idesika yayo. Yizalise ngoomama beqabane lakho nabantu abathandayo-kuquka nawe.
Ukuvuswa kweArtifact ikhalenda yeefoto zewindows, ukusuka kwi- $ 30, ArtifactUprising.com
Umtsalane wokuHamba oMnandi
Le ntlobo yomqamelo wentamo iyakunceda i-MIL yakho ibambe ubuthongo obufunekayo xa usendleleni. Kodwa sukuthatha nje ilizwi lethu ngalo, jonga uphononongo oluhle lweenkwenkwezi ezintlanu!
I-Trtl umqamelo wokuhamba, $ 30, Trtl.com
Iseti yeSampler yeApéritif
Usacinga ukuba uza kumthathani umkhwekazi wakho ngeeholide? Olu khetho lwe-apéritifs yeyona ndlela ifanelekileyo yokuhlamba isidlo sangokuhlwa sosapho esimnandi. Khetha ezine iincasa ezahlukeneyo kuye ukuba azenze isampulu okanye anamathele kuyo nayiphi na ocinga ukuba angayithanda kakhulu.
Indlu ISampler Kit, $ 40, Haus.com
Ijezi emnandi yeCashmere
I-Summersalt igxile kwimfashini, iimpahla ezisebenzayo, ke lixesha lokuba wazise uphawu kumamazala wakho. Mqalise ngale sweta ye-cashmere ehambelanayo, isipho esingapheliyo.
Ihlobo I-luxe cashmere idibanisa ijezi yentamo yejeli, $ 135, Summersalt.com
Umdlalo weholide yeholide
Ukuba umama wakho we-SO unomdla wokuhlekisa, izipho zomamazala wakhe ezihlekisayo azikhawulelwanga. Lo mhlobiso wesiko lusuku oluhle lweKrisimesi kumamazala wakho (nalo luhlobo olumnandi).
Ezo zipho Umhlobiso weKrisimesi ohlekisayo, $ 20, Etsy.com
Incwadi yokuthengisa iresipe
Ukuba i-MIL yakho ingumbuki zindwendwe kwezona zininzi, uya kuthanda ukongeza le ncwadi yeresiphi kwingqokelela yakhe. Ibandakanya iitoni zokupheka okumnandi eziyilelwe ukwabelana nabantu obathandayo, ukusuka uh- ukubamba inkukhu ethosiweyo kwi-tangy lemon pie.
UWilliam Morrow Iincwadi zokupheka Itheyibhile yeMagnolia nguJoanna Gaines, iidola ezingama-30 kulukhuni, Amazon.com
Ibhokisi yokubhalisa yobuhle
Iibhokisi zokubhaliselwa zenza ezinye zezona zipho zibalaseleyo zeKrisimesi kumamazala wakho. Nabani na othanda ukuhambisana neemeko zobuhle zamva nje uyakuxabisa IBirchbox's Ukuhanjiswa kwenyanga. Iphakheji nganye ibandakanya ukhetho lwe-niche kunye neemveliso eziphezulu zokuba isampulu.
Ibhokisi yeBirch ikhadi lesipho sobulungu, ukusuka kwi- $ 45, Birchbox.com
Isixhobo sokuFunda ngeDijithali
Ukuba umbono wakhe wokuphumla ujikeleza nencwadi elungileyo, yiya nento eza kwenza kube lula ukubhudla phantsi naphi na. Olu seto lohlobo luza nayo yonke into eza kuyidinga ukonwabela ufundo aluthandayo ekuhambeni, kubandakanya ikhava yokukhusela enemibala kunye neadaptha yamandla.
IAmazon Uhlobo lwePhepha le-Paperwhite eliyimfuneko, i- $ 190, Amazon.com
Ingubo entle yokuphosa
Ukuphelelwa kwezimvo zesipho seholide kumamazala wakho? Zama le ngubo iphosa ubutofotofo ekulula kakhulu ukuyinyamekela. Angayiphosa ngqo kwindawo yokuhlamba kwaye ayizukuncipha, ipilisi okanye imibimbi.
Amaphupha eBarefoot I-CozyChic iphosa ingubo, i- $ 147, Imvu.com
Ukukhangela indlela yokwenza enkosi MIL yakho ngokuzibandakanya kwakhe kusuku lwakho olukhulu? Nokuba unegalelo kwezemali, ngobuchule okanye ngokweemvakalelo, isipho esicingisisiweyo sisenzo esibonakalayo. Ngelixa kulungile ukumphatha kwinto enje ngesidlo sangokuhlwa okanye i-manicure, nazi ezinye iindlela zezipho ezifanelekileyo kumtshato.
Umzekeliso womtshato wesintu
Esi sipho somtshato sikamazala wakho sifuna ukuphanda, kodwa umphumo wokugqibela ufanelekile. Khangela ukuba unxibe ntoni ngosuku olukhulu kwaye uthumele igcisa inkcazo okanye ifoto, kunye nenkcazo okanye ifoto yantoni uza unxibe. Ukusuka apho, uyakufumana isiko lokuzoba nibabini ngokwangana okumnandi enxibe iimpahla zomtshato-ingaba kuhle kangakanani oko?
UJes utshatile Umama wesiko lomtshakazi okanye umyeni ozoba ukuprinta, ukusuka kwi- $ 99, Etsy.com
imibono yesipho sokuzalwa somfazi
Ingxowa yeVelvet Makeup
Ngubani othe izipho zomamazala wakho ozayo azinakuba luncedo? Mnike indawo yokugcina zonke iimveliso zakhe zobuhle ngale luxe, ibhegi yokwenza velvety. Unga monogram kuye. Ikwathengiswa kuluhlu olubanzi lwemibala, ke kulula ukuyifumana enokuyithanda.
Ivenkile yeKnot I-velvet encinci eyenziwe nge-quilted bag, $ 11,
Umgexo omncinci wePearl
Ubucwebe ayisiyo eyakho kuphela iintombi ! Enkosi kumlingane wakho mama ngenkxaso yakhe kusuku lwakho olukhulu ngale ntsimbi intle yomqala. Ieperile zamanzi amatsha kukuchukumisa okungafaniyo okuya kuncedisa nayiphi na impahla.
Iimvakalelo eziDarling I-pearl yomqala wamanzi amnandi, $ 29, Etsy.com
Uhambo lweWayini yeWayini
Yazisa i-MIL yakho ukuba uthetha kangakanani kuwe ngale nto intle ithi 'mamezala ongcono.' Sisipho esimnandi nesilula esiya kuzisa uncumo ebusweni bakhe ngalo lonke ixesha eyisebenzisa.
Iikomityi zeWimly Isiselo somdiliya, $ 19, Etsy.com
Ibhokisi yeTinet engaphakathi
Oku kuswiti isipho somtshato sabazali Ngokwenene enkosi MIL yakho ngokukhulisa uthando ngobomi bakho. Kukho uguqulelo olufundayo, 'enkosi ngokunyusa indoda yam amaphupha am,' kwaye enye ithi, 'enkosi ngokukhulisa umntu obhinqileyo.' Unokusebenzisa ibhokisi yokugcina izinto ukugcina iitrinkethi zeminyaka ezayo.
USusabella Enkosi ngokukhulisa iNdoda yaMaphupha am ukugcina ibhokisi, $ 53, Etsy.com
Le bracelet yeeperile engaphantsi inokunxitywa ngento entle, iyenze isikhumbuzo esithandekayo sobudlelwane bakho ukuba ikamva lakho le-MIL linokuthatha kuyo yonke indawo.
Ngcono isacholo esincinci seeperile, $ 65, Mejuri.com
Ibhokisi yeZipho eziPhathwayo
Abafazi abatshakazi kunye abatshati ayizizo zodwa ii-VIP ezixabisa iibhokisi zezipho! Olu seto lubhekiswe 'komnye umama' wakho kubandakanya iibhombu ezimbini zokuhlamba, ikhandlela elinuka kamnandi lavender, isepha eyenziwe ngesandla nokunye. Yibhasikithi yesipho esifanelekileyo kuye ukuba azitofeze ngayo emva komtshato.
Izipho zeAva ezithandekayo Enye ibhokisi yesipho seMama, ukusuka kwi- $ 60, Etsy.com
Ityala elithandekayo lobucwebe
Le sutikheyisi mncinci kufuneka ibe yeyona mpahla incinanana sikhe sayibona! Ukuba kufuneka ehambele umtshato (okanye wonwabele indlela yokuphila esekwe jet), iya kuba yinto ayithandayo. Kukulungele ukugcina izinto ezincinci kodwa zibalulekile ezinje ngobucwebe.
Kude Isutikheyisi encinci, $ 45, KudeKhaya.com
Isipho sombulelo akufuneki sibize ingalo nomlenze. Ngokwenene yimvakalelo ebalulekileyo. Thatha eli khandlela lihle, elinengqayi yeglasi eprintiweyo enenkcazo ngomamazala: 'umniki ngcebiso, uthando kunye nenkuthazo.'
Vintage Yenziwe ikhandlela lomntu, $ 17, Etsy.com
Ukuhanjiswa kweBouquet entle
Iintyatyambo yenza izipho ezinkulu zokubulela abazali emva kosuku olukhulu. Bathumele ngqo ekhayeni lakhe ukuba bamangaliswe ngento entle angakhange ayilindele.
IBloomsyBox Iintyatyambo zeQueens Crown, $ 65, BloomsyBox.com
Ijenali yesikhumba seMonogram
Umama weqabane lakho ubeke inkathalo enkulu kunye nomzamo ekuncedeni ukuba utshate umtshato wakho wamaphupha. Mbulele ngento anokuyisebenzisa yonke imihla. Andiqinisekanga ukuba ungaqala ngaphi? Izipho ezenzelwe wena yindlela yokuhamba. Siyaluthanda uluvo lweli phephancwadi liboshwe ngesikhumba elibhalwe ngamagama akhe okuqala.
Ihlathi elisithoba Ijenali ebotshiwe eyenziwe ngumntu, ukusuka kwi- $ 64, Etsy.com
Izipho ezintle ze-valentines zakhe
izimvo ezizodwa zakhe
isinxibo esisemthethweni somtshato eyindoda
imiyalezo emifutshane yothando kuye
ngaba uyayifaka imisesane yakho yokuzibandakanya ngosuku lwakho lomtshato
Ngaba u-bruno mars unomntwana
utshata njani kwi-nyc